Xulka Qaranka Somalia oo guul daradii ugu horeysay ka soo hooyey kulankii ay Burundi la yeesheen + Sawiro – idalenews.com
Xulka Qaranka Somalia oo guul daradii ugu horeysay ka soo hooyey kulankii ay Burundi la yeesheen + Sawiro
Xulka qaranka Burundi ayaa galabta 2-0 kaga badiyay xulka Soomaaliya kulan ka tirsanaa tartanka xulalka bariga iyo bartamaha Africa oo ka dhacay magaalada Machakos ee dalka Kenya.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa ku billaabatay si deggan, iyadoo ciyaartoyda xulka Soomaaliya ay muujiyeen dadaal haddana uma suurta-gelin inay gool dhaliyaan.
Macallinka xulka Qaranka Soomaaliya, Maxamed Cabdulle Fara-Yare oo warbaahinta la hadlay ciyaarta kaddib, ayaa sheegay in ciyaartoydiisa ay si wanaagsan u ciyaareen balse ay saameyn ku yeelatay cimilada magaalada lagu ciyaarayay.
Wuxuu xusay in ay rajo wanaagsan ka qabaan kulamada kale ee ay la ciyaari doonaan Tanzania iyo Zambia.
Kulanka labaad ayay Soomaaliya la ciyaari doontaa Tanzania Axadda soo socoto, halka kulanka ugu dambeeya ee qeybta B la yeelan doonto Zambia 4-ta December, labada kulan ayaa qorsheysan in lagu ciyaaro Nairobi.
1- Maxamed Shariif (Koox ka dhisan Holland).
Difaac: 2: Mahad Maxamed Xaaji (Heegan), 6: Kabtan Xasan Cali Rooble Babaay (Elman), 13: Aadan Xuseen Ibraahim (Sahafi FC), 5: Xasan Xuseen Maxamed (Elman).
Jeneraal Ufurow oo loo magacaabay Taliyaha Ciidanka Badda Soomaaliyeed
10 Kun oo ah Qaxootiga Xerada Dhadhaab oo bisha December dhamaadkeeda Somalia loo soo celin doono